Umatshini wokuqhuba oyi-R9 uthotho
Umatshini wokuqhuba we-R9 umatshini wokuqhuba we-CNC: Umshini osebenzayo oshawuweyo: isikeyiti se-slot singasetyenziselwa ukuqhubekisa umatshini wokulungiselela ukuhambisa imodeli yecandelo lekhabhathi umnyango umnyango iphakheji umnyango ucoceko iphakheji yangaphakathi inkuni yomthi eyomeleleyo yefanitshala.
Umatshini wokuqhuba oyi-R7 uthotho
Umatshini wokuqhuba oyi-R7 umatshini wokuqhuba we-CNC: Umatshini osebenzayo: Umatshini osetyenziswayo we-R7 umatshini wokukhuphela i-CNC ukwaziwa ngokuba yi-cnc machining Center.Lo matshini usetyenziswa ngokubanzi kwaye unokuba ngumatshini wekhabhathi womnyango wokhuni kwaye ezinye iindlela zinokuba zizixhobo zetafile yomatshini.
Umatshini wokuqhuba oyi-R6 uthotho
Ngama-R6 uthotho umatshini wokuqhuba we-CNC: Umatshini osetyenziswayo: Umatshini osika i-R6 uthotho lwe-CNC yokusika indlu yefanitshala iyinto yezixhobo zobugcisa, umatshini usetyenziselwa ukusika i-punch punch, njl. Ubuchule bokukhonkxa.
Umatshini wokuqhuba oyi-R4 uthotho
Umatshini wokuqhuba we-R4 umatshini wokuqhuba we-CNC: Umatshini osetyenziswayo: Umatshini osika i-R4 uthotho lokusika umatshini ubizwa ngokuba ziinkqubo ezine zokusika umatshini we-CNC, lo matshini usetyenziselwa ngokubanzi ukuqhubekisa inkqubo yebhodi yefanitshala ukusika iphuli yepunki ngaphandle komqolo.
Ixesha lokuposa: Aprili-24-2020